June 10, 2020 - PARIJATMEDIA
Jun102020 by adminNo Comments
फेसबुक चलाउने साथीहरुले अबस्य पढ्नुहोस है
आजकल मानिसहरुमा सोसल मिडियाको लत यतिधेरै बढेको छ कि दिनहुँ फेसबुकमा केही कुरा पोष्ट नगरेमा के के अपूरो जस्तो लाग्दछ । फेसबुकमा स्टाटस, फोटो तथा भिडियो पोष्ट गरेपछि त्यसमा आफ्ना फेसबुक साथीहरुको ध्यान खिचियोस् र प्रशस्तै लाइक्स तथा कमेन्ट्स प्राप्त होस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ । फेसबुकमा प्रशस्त लाइक तथा कमेन्ट आएमा खुसी लाग्दछ तर यदि आफ्नो पोष्टमा अरूले खासै ध्यान दिएनन् भने खिन्नता महसुस हुन्छ । वास्तवमा फेसबुकजस्ता सोसल मिडिया भनेको आफ्ना साथीसंगी तथा आफन्तहरुसँग सजिलैसँग स’म्पर्क तथा सञ्जालमा रहनका लागि हो । तर जब साथीसंगी र आफन्तसँगको स’म्बन्ध नै फेसबुकका लाइक र कमेन्टबाट निर्धारण गर्न थालिन्छ, तब समस्या उत्पन्न हुन सक्दछ । फेसबुक प्रयोग गरिरहँदा हामीले यस्ता धेरै गल्तीहरु गरिरहेका हुनसक्छौं, जुन हाम्रो गो’पनीयता तथा सामाजिक जीवनका लागि हा’निकारक हुन सक्दछन् । त्यसैले फेसबुक प्रयोग
एक महिलाले पहिलो लोग्नेलाई लेखेको मनछुने अन्तिम पत्र (पढ्नुहोस)
खै के भनेर सम्बोधन गरौं? मलाई नै थाहा छैन। मैले धेरै सोचेर तिम्रो नाममा यो अन्तिम पत्र लेख्दै छु। मलाई आशा छ, तिमीले यो पत्र पाउनेछौं। तिमी र तिम्रो समाजको अगाडि त म च’रित्रहीन महिलाको रुपमा चिनिएकी छु होला सायद। तर, मेरो बाध्यता र मजवुरीलाई कसैले सायदै बुझ्ने कोशिश गर्ला। म आज यो पत्रमार्फत केही कुरा सुनाउँदैछु । तिमीसँग मेरो पहिलो भेट मेरै माइती घरमा मेरो हात माग्न आको दिन भाको थियो। कक्षा ८ मा पढ्दा पढ्दै विहेपछि नि पढाउने कुरा सुनेर मेरो बाआमाले सहमति जनाएका थिए। मलाई त्यसवेला तिमीसँग पटक्कै विहे गर्न मन थिएन। तर, के गर्नु १७ वर्ष भैसकेको पिर मेरो बा आमालाई निक्कै थियो। नभन्दै त्यसको महिना दिनमै म बेहुली भएर तिम्रो घरको आँगनमा मैले पहिलो पटक पाइला टेकेकी थिए। राम्रोसँग वोलचाल समेत नभएको व्यक्तिसँग एउटै ओछ्यानमा रात विताउनु पर्दा म निक्कै डराएकी थिए। तिमी मभन्दा करिव ५ वर्ष जेठो भ
“यस्तो मोबाइल एप, जसले खोजिदिनेछ यौ’न साथी”
स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताका लागि असंख्य एप्स उपलब्ध छन् । ती मध्ये कतिपय अत्यधिक कामलाग्ने तथा ज्ञानमूलक छन् भने कतिपय बेकम्मा र फन्टुस पनि । कतिपय गेमिङ एपले तपाइँलाई मूर्ख पनि बनाउन सक्छन् । तर अब यस्तो एप आएको छ, जसले तपाइँका लागि यौ न साथी खोज्न सहयोग गर्नेछ । मोबाइल फोनबाटै स’हवासको आसनका बारेमा जानकारी दिने खालको एप पहिले नै उपलब्ध थियो । तर यो पछिल्लो एप भने त्यसभन्दा पनि दुइ कदम अगाडि बढेर यौ न कर्मीको खोजी गर्न सहयोग गर्नेछ । अस्टि्रयाका पिया पोपेनरिटरले यसको विकाश गरेका हुन्, जसको नाम पिपर राखिएको छ । यो एप जिपिएसको मद्दतले स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता रहेको ठाउँ वरपर रहेका यौ नकर्मीहरु खोज्न सहयोग गर्नेछ । यो एपको उद्देश्य से’क्सका लागि यौ नकर्मी महिलाहरु खोज्ने पुरुषलाई सजिलो बनाउने मात्र होइन यौ नकर्मीलाई समेत ग्राहक खोज्दै सडकमा आउने बाध्यता हटाउनु हो । अहिले जर्मनीको बर्लिन सहर
थाइल्याण्डमा छोरीहरुसँग हिमानीको टिकटक डान्स : संसारभरी भाइरल [भिडियोसहित]
उक्त गीतमा नृत्य गरिरहेको भिडियो टिकटकमा सार्वजनिक भएपछि यसको संसारभरी सर्वत्र चर्चा भएको छ । त्यहाँ देखिएको हिमानीको सुन्दरताको विश्वभरी नै चर्चा भएको छ । ‘गुराँसको फेदमुनि‘।’ बोलको गीतमा हिमानीले दुई छोरी पूणिर्का र कृतिकासँग नृत्य गरेकी हुन् । तीनैजना कालो पोशाकमा सजिएका छन् र एउटै वान्कीमा कम्मर मर्काएका छन् । पूर्णिका शाहको अकाउन्टबाट अपलोड भएको यो भिडियो केही घन्टामै भाइरल बनेको छ । हिमानीका पति पूर्व युवराज पारस शाहले पनि यो भिडियो ‘मेरो परिवार’ भन्दै लभ रियाक्टसहित फेसबुकमा सेयर गरेका छन् । पूर्णिकाले भिडियोको क्याप्सनमा लेखेकी छन्, ‘यो (डान्स स्टेप) हामीले आमाबाट पाएका हौं । हामीसँग साँच्चै गजबकी आमा हुनुहुन्छ ।’ भिडियोमा पूर्व नवयुवराज हृदयन्द्र भने देखिएका छैनन् । यो भिडियोलाई अहिलेसम्म करिब १९ लाख ८ हजारले लाइक गरेका छन् भने करिब एक हजारको हाराहारीमा कमेन्ट आएका छन् । यतिबेल
काठमाण्डौमा स्कुटर दुर्घटनामा परि २७ वर्षीया सुप्रभा लुईंटेलको निधन
काठमाडौँ, – काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ जडिबुटीमा भएको सवारी दुर्घटनामा एक जनाको निधन भएको छ । जडिबुटीस्थित सडकमा प्रदेश ३–०१–२२ च ८७१० नम्बरको कारले प्रदेश ३–०२–००५ प १५९८ नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–७ काँडाघारीका २७ वर्षीया सुप्रभा लुईंटेलको निधन भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएकी उनको आज बी एण्ड बी अस्पताल ग्वार्कोमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो । कार र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनको निधन पछि बैंकमा काम गर्ने साथी भारत भुसालले लेखेका छन् अत्यन्तै दुखद खबर सुन्न मा आयो। बिश्वास गर्नै गारो, भाविको लेखा अगाडी कस्को के नै लाग्ने रहेछ। हिमालयन बैक लि. बर्दिबास शाखाका प्रमुख मेरा आत्मिय, मिलनसार सह्कर्मि बोधराज खनालको धर्मपत्नी कर्मचारी संचयकोषमा कार्यरत भाउजु सुप्रभा लुईटलको हिजो मिति २०७७ जेठ २७ गते कार्यालय जादा काठ
आफ्नो पत्नी र छोरीहरुको टिकटक सामाजिक संजालमा भाइरल भएपछि पुर्व युवराज पारसले दिए प्रतिक्रिया (भिडियो)
काठमाडौँ, २६ जेठ । पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह आफ्नो दुई छोरी पुर्णिका र कृतिकासंग सामाजिक संजाल टिकटकमा रमाइरहेको भिडियो अहिले भाइरल भइरहेको छ । छोरी पुर्णिका र कृतिका शाहको टिकटक एकाउन्टमा राखिएको भिडियो धेरैले शेयर गरेका छन । यहि भिडियो देखे पछी पुर्व युवराज पारस शाहले पनि सामाजिक संजालमा लब साइन सहित उक्त टिकटक भिडियो आफ्नो प्रोफाइलमा राखेका छन । सम्बन्ध बिग्रियो भने पनि पारस अझै आफ्नो परिवारलाई उत्ति कै माया गर्छन भन्ने एउटा प्रमाण हो यो ।पारसले पत्नी हिमानी र छोरीहरु पुर्णिका र कृतिकाको टिकटक भिडियो शेयर गर्दै लेखेका छन् – ‘फ्यामिली’ र चेम्बर अफ माई ग्रेट’ । २ हजार बढी फलोयर रहेको पुर्णिकाको टिकटक एकाउन्टमा चर्चित गायक सबिन राईको गीत ‘गुरासको फेदमुनी’मा कम्मर मर्काएको भिडियोलाइ धेरैले हेरिरहेका छन् । त्यस्तै अर्को भिडियोमा हिमानी र छोरीहरुसंग डिस्को म्युजिकमा नाचिरहेकी दे